Fa maninona no tsy tonga any amin'ny boaty mailaka ireo mailakao? | Martech Zone
Fa maninona no tsy tonga any amin'ny boaty mailaka ireo mailakao?
Asabotsy, Aogositra 27, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Ny sasany amin'ireo orinasa sendra anay dia mandefa ny mailak'izy ireo rehetra, ao anatin'izany ny hafatry ny rafitra, avy amin'ireo mpizara anatiny. Maro amin'izy ireo no tsy manam-bola hahitana raha tonga any amin'ny toerana nalehany ireo mailaka… ary maro amin'izy ireo no tsy. Aza mieritreritra an'izany satria ianao naniraka mailaka iray izay nahatonga azy io tao anaty boaty.
Izany no antony isian'ny indostria iray manontolo an'ny mpamatsy mailaka. Fitaovana goavambe ny mailaka - matetika miteraka fihenam-bidy avo indrindra noho ny mpanelanelana amin'ny Internet hafa. Raha tsy miaina an'io ny orinasanao dia mety hivoaka ny mailakao - fa tsy novakiana na nosokafana.
Blacklists amin'ny indostria - Ny ankamaroan'ny mpamatsy tolotra internet (ISP) dia misoratra anarana amin'ny lisitra mainty lisitra. Spamhaus dia serivisy lisitra mainty malaza. Ny fikambanana toa an'i Spamhaus dia manara-maso ny fitarainan'ny orinasa iray ary ambany ny tokonam-baravarana. Raha sendra ao anaty lisitra mainty ny orinasanao dia mety manakana ny mailaka rehetra amin'ny adiresy IP anao ny ISP tsirairay. Misy lisitra mainty an-jatony any - noho izany ny loka tsara indrindrao dia ny misoratra anarana amin'ny serivisy Blacklist Monitoring mba hahazoana antoka fa tsy misy ianao ary koa mahazo fanampiana amin'ny fomba hanesorana azy ireo.
Lisitra mainty ISP - Mpanome tolotra Internet toa ny Yahoo! AOL sy ny hafa koa mitazona ny lisitra maintiny. Betsaka ny zavatra azonao atao mba hahazoana antoka ny tahan'ny fandefasana entana, ao anatin'izany ny fahazoana ny orinasanao whitelist miaraka amin'izy ireo. Raha mandefa mailaka avy amin'ny rafitrao ianao, dia aza hadino ny manohitra ny ekipanao IT hametraka ilay fitandremana ilaina an-toerana.
Bounces malefaka - Indraindray dia feno ny boaty mailaka ka tsy manaiky ny mailaka ny mpampiantrano na ny mpamatsy. Mandefa hafatra miverina izy ireo. Antsoina hoe a bouncing malefaka. Raha tsy manana fitaovana fikirakirana bouncing malefaka ny rafitrao dia tsy handefa mailaka hafa ianao rehefa manadio ny boaty fampidirany ny mpampiasa. Ity dia antsoina hoe fitantanana bouncing ary sarotra be io. Mba hampitomboana ny taham-pahaterahana dia hanandrana handefa imailaka am-polony imbetsaka ny mpanome tolotra mailaka raha ilaina izany.
Mitsoka mafy - Raha tsy mety intsony ny adiresy mailaka dia handefa hafatra matetika ny mpamatsy. Raha tsy manao na inona na inona amin'izany fampahalalana izany ny rafitrao ary manohy mandefa any amin'ilay adiresy dia hahita olana ianao. Ny fandefasana hafatra amin'ny adiresy mailaka ratsy dia fomba iray mora handehanana amin'ny lafiny ratsy amin'ny mpamatsy tolotra Internet. Hanomboka hanary ny mailakao amin'ny folder SPAM izy ireo.
Content - Andalana lohalaharana amin'ny mailaka ary ny atiny dia mety misy teny vitsivitsy izay mitarika ny sivana SPAM. Tsy fantatrao fa ny mailakao dia alefa mivantana any amin'ny fako junk ary tsy hamaky azy akory ny mpandray anao. Ny ankamaroan'ny mpanome tolotra mailaka (sy ny fitaovana ivelany sasany) dia manana sivana fandinihana votoaty. Hevitra tsara ny manamarina ny hafatrao hanatsarana ny vintana hahatonga azy io amin'ny boaty.
Tsy ilaina koa ny mamaky banky amin'ireo fitaovana ireo. Na dia mety handany dolara an'arivony maro aza ny fisoratana anarana amin'ny mpamatsy tolotra mailaka dia azonao atao ihany koa ny misafidy ny sasany serivisy fitaovana mailaka. Ny sarany amin'ny Blacklist Monitoring, ohatra, dia latsaky ny $ 10 isam-bolana!
Avy amin'ny RIM ny vehivavy, avy amin'ny Google ny lehilahy
Ampiasao amin'ny marikao amin'ny fampielezana marika PPC
28 Aogositra 2011 amin'ny 4:59 PM
Ny sivana atiny dia midina kokoa noho ny andalana lohahevitra ihany koa. Raha mampiasa satroka be loatra ianao, be herim-po, na koa hakitroky hyperlink ao amin'ny kopian'ny vatana mihoatra ny mahazatra, dia afaka mihemotra amin'ny boatin-junk ianao.